Aqiriso-nin Daacish ka tirsanaa oo Muqdisho lagu xukumay! – Hornafrik Media Network
Aqiriso-nin Daacish ka tirsanaa oo Muqdisho lagu xukumay!
By HornAfrik	 On Jul 26, 2018
Hornafrik-Maxkamadda darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ayaa waxay ku dhawaaqday Xukun dacwad ciqaabeed loo heystay eedeysane Jaamac Xuseen Xasan Nuuni oo Xafiiska Xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka sida ay ku soo eedeysay inuu ka tirsan yahay Kooxda Argagixisada Daacish una qaabilsanaa farsameynta Qaraxyada.
Maxkamada darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ayaa u caddaatay in eedeysane Jaamac Xuseen Xasan Nuuni uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay,waxayna Maxkamadu ku xukuntay Xabsi Daa’im,waxayna Maxkamaddu intaasi raacisay in cidii ku qanacsaneyn Xukunka Maxkamadda u furan tahay racfaan
Mas’uul ka tirsan dowladda Soomaaliya oo loo xiray Musuq maasuq Lacageed.
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo ka shuray sugitaanka Amaanka , kuna dhaqaay magacyada sadex safiir oo aan la shaacin wadamada loo magacaabay.